Ukufihla Ilizwe Elihle Kunye Nokuloba - I-Airbnb
Ukufihla Ilizwe Elihle Kunye Nokuloba
Indlu esemaphandleni eyinyani ye-19th Cent. Indlu yasemaphandleni eyakhiwe kakuhle eNgilani - inezinto ezininzi zokuqala, imililo yokungena, iisofa ezintle, kunye negadi enkulu egcinwe kakuhle. Indawo efanelekileyo yempela-veki yabantu abathandanayo okanye indawo yokuzonwabisa esemaphandleni kunye nosapho okanye abahlobo. Ukuhambahamba eWoodland, ukukhwela, ukuhamba ngebhayisekile nokuloba kuyafumaneka. I-wi-fi ekhawulezayo. Iibhari/ukutya okumnandi kufutshane. Izinja zamkelekile. (Xa ubhukisha, nceda uquke igama elipheleleyo londwendwe kunye neenkcukacha ezimfutshane, ukusinceda siphucule amava akho eholide).
I-Fish Cottage lelinye leqela lezindlu ezazinezakhiwo ezakhiwe yi-Earl of Portsmouth ngenkulungwane ye-19 ukuhlalisa umgcini womdlalo we-Devonshire yakudala ye-Eggesford House. Ijikelezwe ngamahlathi, inegadi enkulu esemaphandleni, indlu esemaphandleni ineholide epholileyo, ikude kuyo yonke, ngoxa ikumgama omfutshane ukusuka kwiivenkile zedolophana ezikufutshane - kunye nenethiwekhi ye-wi-fi ekhawulezayo!
Le ndlu isemaphandleni inezinto onokuzisebenzisa zale mihla, kuquka into eyenza kufudumale, kodwa inobuntu bayo bokuqala obuyi-1840 kunye nezinto ezininzi zakuqala. Kwindawo engaphakathi enamagumbi aliqela apho unokuphumla uze wonwabele ukuhlala kwakho. Phezulu kumagumbi okulala amabini asemaphandleni, aneenkosi ezitofotofo kunye neebhedi ezimbini, oomatrasi be-hypoallergenic Miracoil kunye namashiti omqhaphu, ajonge igadi. Ngaphantsi ligumbi elikhulu lokuhlala elinesitovu seenkuni, isofa etofotofo nezitulo zesikhumba. Kukho inkqubo ye-studio ukuba usenazo naziphi na ii-CD okanye ii-Cassettes ozithandayo zokudlala kodwa kukho ne-adapter ye-cable ye-ValleyA ekuvumela ukuba udlale umculo ngefowuni yakho usebenzisa inkqubo yespeaker. Igumbi lokutyela laseGadini lidibana negumbi lokuhlala kwaye linetafile enkulu yokutyela kunye nezitulo zeentsuku ezintandathu. Isifundo esineencwadi sinomlilo ovuliweyo, iofisi yezinto zakudala kunye nesofa yesikhumba kunye nezitulo. Kukho ikhitshi elinazo zonke izixhobo zombane zokupheka, umatshini wokuhlamba izitya nowokuhlamba impahla. Igumbi lokuhlambela lineshawa, isinki, ibhafu yakudala eneshawa yezandla nendlu yangasese.
Indlu Esemaphandleni Yeentlanzi ikwinduli enamahlathi amaninzi ngaphezu komlambo wakudala owela umlambo i-Taw e-Eggesford. Kumgama olula we-Exmoor kunye ne-Dartmoor, kwi-Unesco Biosphere entsha ekhethiweyo, le ndlu isemaphandleni yeyona ndawo ifanelekileyo yokubuka iindawo ezisemaphandleni zase-Devon ezingcolileyo. Yenye yeekona ezimbalwa eNgilani apho amanqanaba aphantsi okungcoliseka okukhanyayo avumela iindwendwe ukuba zonwabele isibhakabhaka sasebusuku esasele sinyamalele kwenye indawo. I-Exmoor National Park ikhethwe njenge-International Dark Sky Reserve – indawo yokuqala eYurophu ukufumana le accolade.
Iipaki Zesizwe Zase-Exmoor neDartmoor zikumgama omfutshane ngemoto ibe zidume ngokubuka iindawo ezintle namathuba okuhamba, okukhwela nokuloba. Unxweme lwaseNorth Devon olumangalisayo, kunye nolwandle olunentlabathi kunye nokuhambahamba kakuhle ngaselunxwemeni yindawo efanelekileyo yohambo losuku ukusuka kwindlu esemaphandleni. Kukho iilali ezahlukeneyo kunye needolophu ezincinci ekulula ukufikelela kuzo (iChulmleigh kunye neWinkleigh zezona zikufutshane) kunye neebhari, iivenkile kunye neevenkile zokutyela. Uninzi lweedolophu ezinkulu ezifana neSouth Molton kunye neBarnstaple, iimarike zemveli zeveki – iindawo ezifanelekileyo zokudibana nabantu basekuhlaleni nokuthenga imveliso yabo. Ukukhwela ihashe kunye nezitepsi ziyafumaneka ekuhlaleni ibe ezinye izinto ezenziwa ngamaxesha athile onyaka zinokufunyanwa.
Kwimayile eziyi-45 ubude, i-Taw yenye yemilambo emikhulu ye-Devon kwaye iphakame kumathambeka e-Dartmoor kwaye kunye namatye ayo, uMlambo i-Mole, i-Yeo kunye ne-Dart encinci, ibaleka emantla ukuya emaphandleni amahle ukuya e-Barnstaple nakwi-Bristol Channel. I-Taw inikezela ngendawo yokuhlala yezilwanyana ezininzi kunye nezityalo ngokufanayo, nto leyo ebangela ukuba uninzi lomlambo lukhuselwe njengeeNdawo Ezinomtsalane Ezikhethekileyo (SSSI). Ii-Otters ziphinde zibe zininzi kwaye zinokubonwa kakhulu ngokuhlwa kwasehlotyeni ngabathandi be-anglers okanye abathandi bemvelo abazimisele ukuhlala bethule kwaye bengenabungozi ebhankini yomlambo. I-Taw estuary eyinxalenye ye-UNESCO Biosphere yindawo entle yokuchitha imini ubukele iintlobo ezininzi zeentaka ezihambayo ezinokufunyanwa apho. Inani leentaka ezihambayo, kuquka ii-lapwings, ii-curlews kunye nee-redshanks, zingafikelela ngaphezu kwe-20 000! Kukho amathuba amahle okuloba i-salmon, i-trout yolwandle kunye nokuloba i-trout ecaleni kwe-Rivers Taw kunye ne-Mole, ekufutshane kwi-Fox and Hounds Hotel e-Eggesford okanye i-Langa e-Umbberleigh, okanye kwiintlobo ezahlukeneyo zeentlambo i-Taw ne-Mole.
Inkqubo yokuloba inokulungiswa ngeentlobo ezahlukeneyo zemilambo yasekuhlaleni. Umnikazi unenye yezona ndawo zidumileyo zokuloba kumbindi weTaw. Nceda uvumele ubuncinane iiveki ezimbini ukuba silungiselele uhambo lwezemidlalo kunye nokuhambahamba okukhokelwayo.
UJulie noMichael basenokuba abakho kwisayithi kodwa bayakuvuyela ukuphendula nayiphi na imibuzo nge-imeyile/ngefowuni baze balungiselele uhambo olukhokelwayo lokuloba neminye imisebenzi, ukuba kunokwenzeka ngeeveki ezimbalwa kwangaphambili. Nceda uqhagamshelane noMichael ukuba unayo nayiphi na imibuzo okanye izinto ezikuxhalabisayo.
UJulie noMichael basenokuba abakho kwisayithi kodwa bayakuvuyela ukuphendula nayiphi na imibuzo nge-imeyile/ngefowuni baze balungiselele uhambo olukhokelwayo lokuloba neminye imise…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Chulmleigh